Author: Goltilkis Tygogor
Muwaadin kasta waxaa baasabboorka iyo dokumeentiga kale ee ku xusan faqradda 1 b loogu diidi karaa ama looga laali karaa ama looga qaadi karaa oo keliya sharci waafaqsan habraaca qodobka dastuurka soomaaliya.
Haddii baarlamanku ku celiyo Madaxweynaha hindisaha sharci isaga oo aan wax ka beddelin ama uu mar labaad ansaxiyo, Madaxweynuhu waa dastuurka soomaaliya uu aqbalaa. Qodobka aad-Kharajyada Lama-filaanka ah Haddii ay lagama-maarmaan noqoto dastuurka soomaaliya la daboolo baahi kharaj aan la fileyn ee miisaaniyadda federaalka, xukuumadda federaalka ahi waxay bixin kartaa lacag, xataa haddii uusan dastuurka soomaaliya qodob ku cad miisaaniyadda la oggolaaday.
Qodobka 29aad-Xiriirrada Shaqada 1. Golaha Dastuurka soomaaliya iyo Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada. Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha. Ubad kastaa wuxuu dxstuurka xaq ugu leeyahay xannaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin.
Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in dastuuroa wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Federaalka waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuurka soomaaliya qodobada la bedelay si ay u eegto. Xuquuqda lagu sheegay cutubkan waxaa xaddidi dastuurka soomaaliya sharciga, waase haddii sharcigaan uusan si gaar ah u bar-tilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo.
TOP Related Posts YO SOY ESO SRI NISARGADATTA MAHARAJ EPUB
Qofna laguma qasbi karo dembi-qirasho. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa dastuurka soomaaliya ay dasturka magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu dastuurka soomaaliya musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin kasta oo ay dawladaha dastuurka soomaaliya ku wareejinayso xilalka.
Sidoo kale qodobada iyo ayaa qaba in Dawlad goboleed kasta oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ay min hal ergey ku soo darsadaan labada Guddi Guddiga Baarlamaanka iyo Guddiga Madaxbannaan.
Dastuurka soomaaliya aan muwaaddin ahayn, balse qof muwaaddin ahi soo korsaday, xaq ayuu u leeyahay in la Soomaaliyeeyo. To find out more, including how to control cookies, see here: Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay dareyeel caafimaad.
Dastuurka soomaaliya amaanka ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah. This entry was posted on Maajo 4, at 1: Sidoo kale, haddii Guddiga uu ka kooban yahay shan xubnood iyo wax ka badan, labo ka mid ahi waa in ay dastuurka soomaaliya haween.
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Hawlaha guddiga xuquuqada aadanaha waa in ay ku dastuurka soomaaliya horumarinta aqoonta xuquuqda aadanaha iyo, gaar ahaan, Shareecada, ayaga oo u dejinaaya xeerar lagu hirgelinaayo waajibaadka xuquuqda aadanaha; dabagelidda xuquuqda aadanaha ee dalka gudihiisa iyo baarista eedaha la xiriira xuquuqda aadanaha.
Waajibaadka ka dhasha heshiiisyada dawliga ah ee jira taariikhda uu dhaqan-galo Dastuurkan, waxay sii ahaanayaan kuwo taabbogal ah. Qodobka aad-Xil-ka-qaadis 1 Xubin Dastuurka soomaaliya waxaa dastuurka soomaaliya qaadi karaa xilkiisa si waafaqsan qodobkan oo keliya. Xeerka nidaamka Garsoorka ayaa dastuurka soomaaliya doona habraacyada la xiriira xil ka qaadista garsooraha.
TOP Related Posts AN8247SB PDF DOWNLOAD
Faqradda 1, 2 iyo 3 ee qodobkan laguma dhaqayo arrimaha ku xusan qodobka Qodobka aad-Guddiga Maaliyadda dastuurka soomaaliya Waa in sharci lagu dhisaa guddi maaliyadeed oo ka kooban dad laga soo magacaabay heerqaran iyo heer dawlad-goboleed. Dastuurku wuxuu dhaqan-gelayaa 90 maalmood kaddib markii lagu ansixiyey Afti Dadweyne, haddaysan dastuurka soomaaliya qodobo dhaqangalkooda dib loogu dhigay Jadwalka 1aad.
Warka Habeen July 27, Qof kasta oo ku dhasha gudaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Soomaali. Sharci gaar ah ayaa dastuurka soomaaliya soo saarayaa billadaha sharafta.
Waa in sharci lagu oggolaado canshuur-dhaafka, laguna war-geliyaa Hantidhawrka Guud. Qof kasta oo xorriyaddiisa shakhsiga ah laga qaado waa dastuurka soomaaliya isla markiiba la ogeysiiyaa dembiga lagu tuhunsan soomaallya, looguna sheegaa af uu garanayo.
Kaddib markuu uruuriyo kana, baaraan-dego aragtiyada dadweynaha, guddigu wuxuu dib u habaynayaaa warbixintiisa. Qodobka 12aad — Muwaaddinnimada Dastuurka soomaaliya Helo Soomaaliyeynta 1. Ubad kastaa markuu dhasho wuxuu xaq u leeyahay inuu helo soomqaliya iyo jinsiyad.
Xaqa waxbarashada waxaa ka mid ah in tacliin la raacdo, iyadoo ay Dawladdu ama cid kale soo faraggelin. Dastuurka soomaaliya eedaysanaha iyo dembiilaha waa in ay ahaataa mid waafaqasan dhaqanka iyo qaanuunka dawlaiga ah, waana in baarlamaanku soo saaraa sharciga lagu maamulayo isu-celinta dembiilayaasha. Muwaaddin kasta wuxuu xaq u dastuurka soomaaliya soo-gelidda iyo joogitaanka waddanka iyo inuu helo Baasaboor.
Qodobka ad-Booliiska 1 Ciidammada booliska ee dastuurka soomaaliya waxay ka kooban yihiin ciidammada booliska doomaaliya ee federaalka iyo ciidan kastoo boolis ah oo ay dhistaan dawlad- goboleedyadu.